Ny fisarahana | Martech Zone
Ahoana raha niaraka tamin'ny olona toa azy ireo izahay nitahiry azy ireo? Mety handeha toa izao ...
Satroka tendron'ny Mack ao amin'ny bilaogy The Viral Garden.
Tags: fahafahana misafidyara-barotrafanantenan'ny mpanjifakendrena ho an'ny mpanjifamampiarakalasibatra demografikaMponinahoronan-tsary mampihomehyhatsikanalasibatrany fisarahana
May 19, 2007 amin'ny 1: 12 AM
Hanampy anao amin'ny lisiko aho ho an'ity fikarohana ity. Casting tena tsara.
May 19, 2007 amin'ny 1: 54 AM
Fanentanana miharo volo sy vaovao. Avy amin'ny MICROSOFT!
Ary tena mahaliana ny mahita endrika vaovao - internet fotsiny, izay midika fa afaka mitantara tantara lava kokoa ianao nefa tsy misy sazy lafo.
Microsoft dia lasa lasa tsy dia ratsy loatra 😉